I-Tailwind Yenza: Yenza, Cwangcisa, kwaye upapashe izikhonkwane ezintle kwiPinterest | Martech Zone
Lwesine, Matshi 10, 2022 Lwesine, Matshi 10, 2022 Douglas Karr
Tailwind Yenza yenza umyili womgangatho wePinterest Pins ngokukhawuleza kwaye ikuvumela ukuba ulungelelanise kwaye ulungiselele yonke intengiso yakho yePinterest ibengcono kunangaphambili. Ngokucofa nje okukodwa, uyakwazi ukuguqula iifoto zakho zibe ziingcamango ezininzi zoyilo lwePin. Isixhobo se-in-one sikwenza ukuba wenze, ucwangcise, kwaye upapashe iPinterest.
Uyilwa njani ngeTailwind Yenza
Nantsi ividiyo edityaniswe neqela malunga nendlela yokusebenzisa i-Tailwind Yenza.
Tailwind Yenza yenza ukuba abathengisi bePinterest balungelelanise ukuhamba kwabo kwePinterest kwindalo ekhawulezayo, ukupapasha, kunye nohlalutyo olukhoyo.
Lithini Impembelelo kuYilo lwePin oluPhuculweyo kwiPinterest?
Ngakumbi iPinterest igcina -Uyilo lwePin oluphuculweyo olwenziweyo 6.9 amaxesha ngaphezulu ukonga ngokomndilili kubasebenzisi beTailwind! Iiakhawunti ezinabalandeli abangaphantsi kwe-100 zibone ukukhula kwe-10x, ukuya kuthi ga kwi-10,000 abalandeli babona i-2.8x eyongeziweyo, kwaye abalandeli abangaphezu kwe-10,000 babona umyinge wokunyuka kwe-3.1x!
Abalandeli abaninzi bePinterest -Uyilo lwePin oluphuculweyo olwenziweyo 3.7 amaxesha amaninzi abalandeli ngokomndilili kubasebenzisi beTailwind! Iiakhawunti ezinabalandeli abangaphantsi kwe-100 zibone ukukhula kwe-6x, ukuya kuthi ga kwi-10,000 abalandeli babona abalandeli abaninzi be-1.9x, kwaye abalandeli abangaphezu kwe-10,000 babona umyinge wokunyuka kwe-1.8x!
Izikhonkwane ezingakumbi zePinterest zipapashiwe -Uyilo lwePin oluphuculweyo olwenziweyo 4.2 amaxesha amaninzi amaphini apapashiweyo ngokomndilili kubasebenzisi beTailwind! Iiakhawunti ezinabalandeli abangaphantsi kwe-100 zibone ukukhula kwe-6x, ukuya kuthi ga kwi-10,000 abalandeli babona i-2.9x yezikhonkwane ezingaphezulu zipapashwe, kwaye abalandeli abangaphezu kwe-10,000 babona umyinge wokunyuka kwe-1.9x!
Ewe kunjalo, iziphumo zakho zinokwahluka kodwa iTailwind ipapasha i Iziphumo eziqhelekileyo zaMalungu eTailwind minyaka le, ukuze ubone ukuba uthelekisa njani noluntu lweTailwind. Kwaye, ibandakanyiwe kwiakhawunti yakho ye-Tailwind yingxelo elula ebonelela:
Izikhonkwane eziphezulu Ingxelo -Jonga ukuba zeziphi izikhonkwane zakho eziqhuba itrafikhi kumxholo wakho kwaye ufumane umthombo olungele ukuphefumlelwa xa ubona ukuba zeziphi iiPini eziqhuba itrafikhi kumxholo wabanye abantu!
Umhloli wePhini Ngephanyazo jonga izikhonkwane zakho ezicofa kakhulu nezigciniweyo ukuze uhlale uyazi ukuba uphucule ntoni (nokuba awungomntu "amanani").
Ilungu eliqhelekileyo le-Tailwind lifumana i-6.9x yokuphindaphinda ngaphezulu kunye ne-3.7x yabalandeli abaninzi kwi-Pinterest. Qala eyakho Tailwind Yenza uvavanyo kunye 100 Izikhonkwane ezicwangcisiweyo namhlanje!
tags: yenza izikhonkwane zepinterestyemizoboTwilleyuhlalutyo lwepinterestPinterest yemizoboIntengiso yePinterestizikhonkwane zepinterestukupapasha izikhonkwane zepinterestishedyuli yePinterest izikhonkwaneImidiya yokuncokolayemizobo yemidiya yoluntuumsilaukwenza i-tailwind